राजनीतिक दलको एकताले पार्टी ठूलो हुन्छ, पार्टीले बढी सीट जित्नेछ र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। दल ठूलो हुँदैमा र सरकारको नेतृत्व गर्दैमा देश समृद्ध बन्छ र समाजवादी आधार तयार हुन्छ भन्ने होइन। पञ्चायती व्यवस्था बलियै थियो, पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष चलेकै थियो। तर श्रमजीवी वर्गको पक्षमा राजनीति गरिएन। देशमा बहुदलीय स्थापना भएपछि कहिले नेका, कहिले माओवादी र कहिले एमाले बलियो भएकै हो।
नेकाले प्रजातान्त्रलाई जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्न सकेन, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र न्यायले ठाउँ पाएन। बरू अनियमितता बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, हत्या–हिंसाका सृङ्खला बढ्दै गयो, नेकाका नेताहरूसमेत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसे। सरकारले कुनै एउटा कलकारखाना या उद्योग खोलेर आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेन, रोजगारीको बन्दोबस्त गर्न सकेन। रोजगारीकै निम्ति बर्सेनि लाखौंका सङ्ख्यामा देशका युवा युवतीहरू विदेशिए।
दल जति ठूलो भए पनि, जसको दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि आमूल परिवर्तन हुँदैन। बहुमत प्राप्त दलले लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहन सक्छ। तर समाजवादी आधार तयार हुँदैन, समाजवादी क्रान्ति हुँदैन। सङ्घर्ष र आन्दोलन नगरी परिवर्तन सम्भव छैन। संसदमा बहुमत प्राप्त गरेर या संसदीय माध्यमबाट क्रान्ति हुँदैन। सरकारले स–साना सुधार र विकास गरे पनि कम्युनिष्टको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओविचाराधारअनुसार काम गर्नसक्दैन। अहिले दल दलबीच हुन गइरहेको चुनावी तालमेल बढी सीट जित्नकै निम्ति हो, सरकारको नेतृत्व गर्नकै निम्ति हो।
देशमा दलले विचारधारात्मक, प्राविधिक र सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नुपर्छ। दल बलियो भए पनि कुनै क्रान्ति गर्दैन भने कम्युनिष्टको उद्देश्य फत्ते हुँदैन। पूँजीवादी व्यवस्था र अवशेषको रूपमा रहेको सामन्तवादी व्यवस्थालाई उल्ट्याउन सकिंदैन। मुख्य कुरा दल ठूलो र सानोको होइन विचार पक्ष हो। नेका ठूलै भएरै के गर्ने? नेकाले श्रमजीवी वर्गको वकालत गर्दैन, शोषित पीडित जनताको पक्ष लिंदैन। भोलि चुनावी तालमेलले एमाले र माओवादी केन्द्रकै बहुमत प्राप्त सरकार बने पनि बहुमत जनताको हितमा नीति निर्णय गर्दैन। यसअघि माओवादी सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै हो। तर के परिवर्तन भयो? बहुमत जनताले के राहत पाए? अतः संसदीय माध्यमबाट देशमा समाजवादी आधार तयार हुन्छ भन्नु दृष्टिदोष हो। यो राजनीतिक छलछाम हो, कम्युनिष्ट पार्टीले छलछामको राजनीति गर्नुहुँदैन।